Umuncesi weShock, Isikuta Esikagesi, Isithuthuthu Semoto - iLujury
ILujury Technology Co, Ltd. itholakala eTantian Village, eHengjie Town, Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang Province. Yasungulwa ngonyaka we-2002 futhi inendawo yesitshalo esingamamitha-skwele ayi-10,000. Kuyibhizinisi lesimanje elihlanganisa i-R & D, ukukhiqiza nokuthengisa.
Inkampani yethu ikakhulukazi ikhiqiza zonke izinhlobo zezinciphisi ezishaqisayo nezingxenye ezihlobene zezithuthuthu nezimoto zikagesi. Le nkampani yethula imishini yesimanje yokukhiqiza nezinsiza eziphelele zokuxhasa, ifakwe ubuchwepheshe bokukhiqiza basekhaya obuthuthuke kakhulu, ubuchwepheshe bokwelashwa kwendawo nomugqa womhlangano womkhiqizo.
Njengamanje, ukuthekelisa kwenkampani yethu bekukhula unyaka nonyaka, futhi kudlulele emazweni angaphezu kwezi-10 nezifunda ezibandakanya iNingizimu Melika, iMiddle East, iNyakatho Afrika, iThailand, i-Southeast Asia, njll., Futhi ijabulela idumela eliphezulu ezimakethe zaphesheya .
290mm Lujury ukusebenza eliphezulu qu jikelele okusezingeni eliphezulu ...
325mm UKUPHATHA izinga okusezingeni perfor okusezingeni eliphezulu ...
310mm 320mm shintsha adjustable izinga okusezingeni prof ...
R164 290MM isithuthuthu ezingemuva ukushaqeka mfutho scoot ...
200-260mm Lujury Factory sales eqondile quali ...
270mm Lujury izinga okusezingeni umfutholuketshezi adjustable ...
Inkampani yethu ineminyaka engu-15 yesipiliyoni sokukhiqiza.
Ukushaqeka kwethu kusezingeni elihle futhi amanani ethu aphansi.
Ngemuva kokuthumela, uma unemibuzo noma izinkinga ngemikhiqizo yethu, sicela uxhumane nathi futhi sizokunikeza izixazululo.